Akwụkwọ Shane Barker dere na Martech Zone |
Edemede site na Shane Barker
Nchịkọta Google na-enye anyị ọtụtụ data dị mkpa iji melite arụmọrụ weebụ anyị. O di nwute, anyi anaghi enweta oge ozo iji amu data a ma gbanwee ya n'ime ihe bara uru. Ọtụtụ n’ime anyị chọrọ ụzọ dị mfe na ngwa ngwa iji nyochaa data dị mkpa maka imepụta weebụsaịtị kacha mma. Nke ahụ bụ kpọmkwem ebe mkpesa akparamàgwà Google Analytics batara. Site n'enyemaka nke akụkọ omume ndị a, ọ ga-adị mfe iji chọpụta ngwa ngwa ọdịnaya gị
Nchịkọta Google kwukwara n'oge na-adịbeghị anya ihe dị oke mma iji nyochaa mmetụta na-egbu oge nke ndị ọbịa gị nke a maara dịka nyocha otu, nke bụ ụdị beta nke ụbọchị nnweta naanị. Tupu mgbakwunye ọhụrụ a, webmasters na ndị nyocha ịntanetị agaghị enwe ike ịlele nzaghachi oge nke ndị ọbịa na weebụsaịtị ha. O siri ike ịchọpụta ma ndị ọbịa X bịara na saịtị gị na Mọnde mgbe ahụ ole n'ime ha gara ụbọchị na-esote ma ọ bụ